The Ab Presents Nepal » पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य घट्यो, ग्यासको मूल्य बढ्यो हेर्नुहोस नया मूल्य तालिका !
पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य घट्यो, ग्यासको मूल्य बढ्यो हेर्नुहोस नया मूल्य तालिका !
काठमाडौं-: नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपी ग्यासको मूल्य बढेको भन्दै निगमले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु २५ ले वृद्धि गरेको हो । यससँगै ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर रु एक हजार ३७५ पुगेको छ ।
प्रकाशित मिति February 4, 2020